October 2, 2020 October 2, 2020 adminLeaveaComment on डा. केसी भन्छन्- ‘साधारण माग पूरा गर्न नसक्ने यो सरकार किन चाहियो ?’
ओलीजीले द`म्भ कार्यकर्तालाई देखाउने हो, जनतालाई होइन । जनताले भो`ट दिएर जिताएको हो, अब जनताको काम गर्नुपर्छ ।’
काठमाडौँ — आ`मरण अन`शन तोड्न सरकारले गरेको आ`ग्रहलाई डा. गोविन्द केसीले अस्वी`कार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का नि`र्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयो`जित पत्रकार सम्मे`लनमा सरकारका प्रव`क्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चि`कित्सा शिक्षा सुधारका सबै माग पूरा हुने च`रणमा रहेको जनाउँदै स`त्याग्रह तोड्न डा. केसीलाई आ`ग्रह गरेका थिए  ।
‘वार्ता टोली ग`ठन नगरीकनै जनताको मा`ग पूरा गर्नुपर्थ्यो तर वा`र्ता टोली नै गठन गर्नु त परै जाओस्, सरकारले स`त्याग्रह फिर्ता लिनुस् भन्नु दु`र्भा,ग्यपूर्ण छ,’ डा.केसीले कान्तिपुरसँग भने । डा. केसीले ३ करोड नेपालीका लागि उठाएको मु`द्दाको हकहितमा नभई बिचौ`लिया, मा`फिया, दलाल, अप`राधीको स्वा`र्थ पूरा गर्न र आफ्नो द`म्भ देखाउन सरकार व्य`स्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । शारीरिक रूपमा कम`जोर भइसकेका उनले आ`क्रोश पोखे, ‘वार्ता टोली ग`ठन नगर्ने तर सत्याग्रह फि`र्ताको आ`ग्रह गर्ने ? संविधानले लोकतान्त्रिक गणत`न्त्र भनेको छ, यो ओलीत`न्त्र त होइन नि !’
सरकारले माग पूरा गरे एक मिनेट पनि नकुरी सत्याग्रह फि`र्ता लिने उनको भनाइ छ । ‘म जनताको हकहितका लागि लडेको हो, अति साधारण माग छन् । ती पूरा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को अनुरोध भन्ने कि के भन्ने, त्यो मलाई स्वी`कार्य छैन ।’ डा. केसीले सरकारले जनमतप्रति बफादारी नदेखाएको आ`रोपसमेत लगाए । ‘जनताले भोट दिएर उनीहरू सत्तामा पुगेका हुन् । जनताले आफ्नो पेट काटेर तिरेका करबाटै उनीहरू तलबभत्ता खान्छन् । जनताप्रति बफादारी देखाउनुपर्नेमा बिचौलिया, मा`फिया, द`लाल, अपराधीको सं`रक्षक बन्न खोजे,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले आफैं गर्नुपर्ने काममा हामीले माग गरिरहेका छौं ।’
पत्रकार सम्मे`लनमा मन्त्री ज्ञवालीले डा. केसीले उठाएका माग पूरा भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै कोभिड म`हामा`रीका बेला पूरा भइसकेका विषयलाई माग बनाएर द`बाब नदिन आग्रह गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन आईवरी उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आइसकेको उनको भनाइ दियो । मन्त्री ज्ञवालीले सातवटै प्रदेशमा सरकारी तवरबाट मेडिकल कलेज खोल्न राखेको मा`गअनुसार सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन लागेको पनि बताए । ‘अन्य विषयमा पनि सरकारले साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर परीक्षण परीक्षणको दायरालाई बढाएर हालसम्म १० लाखभन्दा बढीको परीक्षण भइसकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौ`ता नगरेपछि बार`म्बार विज्ञ`प्तिमार्फत ध्या`नाकर्षण गराउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि सत्याग्रहमा बस्न बा`ध्य भएको डा. केसीको भनाइ छ । ‘एउटा साधारण मा`ग पूरा गर्न नसक्ने यो सरकार किन चाहियो ? अरूले चलाउँछन् नि । त्यही पार्टीमा अरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘अचम्म लाग्छ, प्रजा`तान्त्रिक मुलुकमा होइन तानशाहतन्त्रमा छुजस्तो लाग्छ ।’ डा. केसी १९औं सत्या`ग्रहमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति क`डा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
उनी आफ्नो माग पूरा नहुनुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै औंल्याउँछन् । सम्झौ`ता गरिसकेको र ऐनमा आइसकेको माग पूरा नगर्नु ओलीजीको दम्भ हो,’ उनले भने, ‘दम्भ ओलीजीले का`र्यकर्तालाई देखाउने हो, जनतालाई होइन । जनताले भो`ट दिएर जिताएको हो, अब जनताको काम गर्नुपर्छ ।’ आफ्नो माग पूरा भए प्रधानमन्त्री ओली र सरकारलाई नै फाइदा हुने डा. केसीले बताए । मा`ग पूरा गर्दा जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै स्या`बासी दिने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य झन् ज`टिल
उपचारमा सं`लग्न स्वास्थ्य टोलीका संयो`जक डा. सुवासप्रसाद आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्य जटि`लता हेरी आईसीयूमा तुरुन्त स्था`नान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
‘उहाँको स्वास्थ्य ज`टिल बन्दै गएको छ । मुटुमा ग`म्भीर प्रकृतिको गडबडी २४ घण्टामा दुई–तीनपटक देखिएको छ ।त्यसले चि`न्ताज`नक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने । कुनै पनि क्षण डा.केसीको ज्यान जो`खिममा पर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार यस्तो स्वास्थ्य जटि`लता शरीरमा इलेक्ट्रोलाइटको अत्यन्त क`मीलगायत कारण देखिएको हो । कान्तिपुर बाट साभार